Deegaanada Soomalida kee baa ugu liita matalaadda siyaasadda ee dumarka? - BBC News Somali
Deegaanada Soomalida kee baa ugu liita matalaadda siyaasadda ee dumarka?
Markii ugu horreysay, BBC Somali waxay marti galinaysaa doodo ku saabsan dumarka guud ahaan gobolka, taasi oo lagu soo beegay isbuucan oo la xusayo maalinta caalamiga ah ee dumarka.
Warbixintan waxaan si gaar ah ugu eegeynaa dumarka Soomaalida ee gobolka geeska Afrika iyo matalaadda ay ku leeyihiin siyaasadda.
Soomaalida waxay ka mid tahay bulshooyinka aysan dumarku ka helin fursado badan siiba dhinaca siyaasadda, balse sanadiihii ugu dambeeyey, waxaa sare u sii kacayay ololaha lagu doonayo in arrintaasi wax looga badalo.
Ololahan waxaa hormuud ka ah koox haween ah, kuwaasoo ku adkeysanayey in ka qeyb noqoshada dumarka fagaarayaasha go'aan gaarista ee siyaasadda ay tahay xuquuq aasaasi ah.
1. Dowladda federaalka Soomaaliya
Click to see content: RC_Women_politics_ws_languages_somali
2. Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaannida ee Somalilandb
3. Dolwad Deegaanka Soomaalida Itoobiya
Waa mid ka mid ah meelaha ay mataaladda ugu fiican ku leeyihiin dumarka Soomaalida, halkaas oo 26% xubnaha loo doortay inay ka mid nqodaan baarlamaanka dowladda fadaraalka ay dumar yihiin.
"Waan ku faraxsanahay kaalinta dowladd deegaanka ay dumarka siisay, gabdhaha hadii siyaasadda laga qeyb galiyo meeshaasi waxaa ka dhalan nabad iyo hormar waxayna ka dhigan tahay bulshadii oo laf dhabarteedii la toosiyay, waxaan u mahadcelinayaa xisbiga dowladd deegaanka Itoobiyo oo xasuustay dumarka waxaana Soomaali weyn dhan kula tallinayaa in taasi tu la mid ah ay sameyaan"., ayay tiri xildhibaanad Nasro Xassan Axmed
Haweeney doorasho kaga adkaatay rag la loolamayay
4. Gobolka Waqooyi Bari Kenya
Safiya Cabdi Nuur ayaa noqotay haweenaydii ugu horraysay oo ka soo jeeda Waqooyi bari Kenya oo ka mid noqota Baaralamaanka iyadoo ka adkaatay rag la tartamayay 2017.
Bulshada kasoo jeeda Waqooyi bari Kenya oo u badan xoolo dhaqato, ayaa in badan oo ka mid ah ay u arkaan inaan diinta iyo dhaqankoodu u ogolayn in haweenku ay hoggaanka bulshada qabtaan.
Inkastoo ay haween badan u tartameen xilal kala duwan, haddana uma suuragalin inay guul ka soo hooyaan, balse kuwa badan ayaa si waafaqsan dastuurka helay magacaabis toos ah oo ay uga mid nqodeen baarlamaaneed deegaannada Mandera, Wajeer iyo Gaarisa